Iko kuverenga kunonakidza Kufanotaura kwaGartner kwetekinoroji gumi dzepamusoro dzegore ra10… Uye mashandiro anoita zvese kushambadzira kwedigital. Kunyangwe kufambira mberi mukuchengetedza uye Hardware kuri kukanganisa kugona kwemakambani kudyidzana kana kugovana ruzivo nevatengi uye tarisiro nekukurumidza uye zvakanyanya.
Cloud Computing - Cloud komputa masevhisi aripo pamwe neakawanda kubva kune yakavhurika yeruzhinji kusvika yakavharwa zvakavanzika. Makore matatu anotevera achaona kuunzwa kwenzvimbo dzakasiyana dzebasa rebasa dzinowira pakati peaya maviri akanyanyisa. Vatengesi vachapa yakarongedzwa yakavanzika gore kumisikidza iyo inounza iyo yevatengesi yeruzhinji sevhisi sevhisi matekinoroji (software uye / kana Hardware) uye nzira (kureva, maitiro akanakisa ekuvaka uye kumhanyisa sevhisi) mune fomu inogona kuitiswa mukati mekambani yemutengi. Vazhinji vachapawo manejimendi masevhisi ekumusoro manejimendi sevhisi kuita. Gartner anotarisira makambani makuru kuti ave nechikwata chakasimba chekutsvagisa panzvimbo na2012 iyo inokonzeresa kuenderera mberi kwesarudzo yekutsvagisa makore uye manejimendi.
Context-Kuziva Komputa - Context-inoziva komputa nzvimbo pane iyo pfungwa yekushandisa ruzivo nezve wekupedzisira mushandisi kana chinhu chinhu nharaunda, zviitiko kubatana uye zvido zvekuvandudza kunaka kwekudyidzana neuyo wekupedzisira mushandisi. Mushandisi wekupedzisira anogona kunge ari mutengi, bhizinesi shamwari kana mushandi. Sisitimu inoziva mamiriro inotarisira zvinodiwa nemushandisi uye zvine mutsigo inosvitsa zvirimo zvakafanira uye zvakagadziriswa, chigadzirwa kana sevhisi. Gartner anofungidzira kuti panosvika gore ra2013, inopfuura hafu yemakambani Fortune 500 achange aine mamiriro-ekuziva macomputer ekutanga uye na2016, chetatu chekushambadzira kwevatengi nharembozha ichave mamiriro-ekuziva-based.
Ubiquitous Komputa - Basa raMark Weiser nevamwe vaongorori veXerox's PARC rinopa mufananidzo wekuuya kwechitatu wave wecomputer uko makomputa akavezwa akaiswa mukati menyika. Sezvo makomputa ari kuwanda uye zvinhu zvezuva nezuva zvichipihwa kugona kutaurirana nematagi eRFID nevateveri vavo, netiweki dzinosvika nekupfuura chiyero chinogona kutarisirwa nenzira dzechinyakare. Izvi zvinotungamira kune yakakosha maitiro eiyo embuing komputa masystem mune anoshanda tekinoroji, ingave inoitwa sekunyaradza tekinoroji kana zvakajeka kutarisirwa uye kubatanidzwa neIT. Pamusoro pezvo, inotipa nhungamiro yakakosha pane zvatinotarisira nekuwedzera zvigadzirwa zvemunhu, mhedzisiro yekushomeka pazvisarudzo zveIT, uye kugona kwakakodzera kunozoendeswa nekumanikidzwa kwekukwira kwemitengo muhuwandu hwemakomputa emunhu mumwe nemumwe.